यस्तो छ तपाईको सोमबारको भाग्य! आफ्नो १९ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् – List Khabar
Home / जीवनशैली / यस्तो छ तपाईको सोमबारको भाग्य! आफ्नो १९ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
यस्तो छ तपाईको सोमबारको भाग्य! आफ्नो १९ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
admin January 2, 2022 जीवनशैली Leaveacomment 350 Views
मेषः बिहानै राम्रो खवर सुन्न पाइने छ । यसले मनमा सामान्य उमंग प्राप्त हुने दिन रहेकोछ । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्नहुन सक्नेछ । मध्यान्ह पश्चात भने अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । आम्दानि मध्यम रहला । बौद्धिक क्षेत्रका ब्यक्तित्व सँगको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला ।
बृषः मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य सम्पादित रहनेछन् । यात्राकारक समय रहेकोछ । अरुद्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । मध्यान पश्चात मानसम्मानमा आधात पर्नसक्ने सम्भाबना रहेकोछ । पारिवारिक स्वास्थमा समस्या उत्पन्न हुनसक्नेछ । नोकरीमा उन्नति मिल्नेछ ।
मिथुनः स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । तपाईको कार्य सम्पादनको श्रेय अन्य ब्यत्तिहरुलाई सहजै प्राप्त हुनेछ । यात्रा झन्झट पुर्ण रहन सक्छ ।
कर्कटः मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । समयको सहि सदुपयोग गर्न नसक्नाले कार्य क्षेत्रमा साधारण ढिलाई भोग्नु पर्नेछ । आफन्तजन हरुको साथ सहयोगको कमि महसुस हुनेछ ।
सिंहः कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन त ना ब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । पारीवारिक भेटघाटको क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । ब्यापार ब्यवसायमा आफ्नो प्रभुत्व रहनेछ ।
कन्याः आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्ययन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । आँट शाहसमा कमि आउनाले कार्यसम्पादनमा समस्या आउन सक्छ । सहयोगी ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले मनमा आघात पुग्नेछ ।
तुलाः सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले सताउनेछ । बौधिक क्षेत्रका ब्यतित्व सगँको संगत द्वारा मन प्रशन्न रहला ।
बृश्चिकः यात्राका क्रममा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । नजिकका मित्रजनहरुसग सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा सामाजिक कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर भईनेछ ।
धनुः स्वास्थ समस्याका कारण सामान्य त ना ब उत्पन्न हुन सक्नेछ । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । मान्यजनको मार्गदर्शन अबलम्बन गर्नाले भाग्योदयको बाटो देखा पर्नेछ । आजको कार्यले भोलिलाई फाइदा रहनेछ । सामान्य शकां उपशकांहरुको निबारण हुने दिन रहेको छ ।
मकरः शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्नहुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । मानसीक चन्चलताले कार्य क्षेत्रमा झन्झट आई पर्नेछ । सामान्य बादबिवादको सामना गर्नु पर्ला । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ ।
कुम्भः तपाईको कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरुको बृद्धि हुनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्न सक्नेछ । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश रहने छ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ ।
मीनः अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ । तपाईको कार्य बाट फाईदा लिनेहरुको सङख्यामा बृद्धि हुनेछ । आट शाहसको बृद्धि हुने योग रहेको छ ।
Previous काे-राेनाकाे नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन फैलियाे, तेस्रो लहरको ख`तरा उच्च, यस्ताे छ कारण !
Next काठमाडौंमा घट्यो अचम्मको घटना, पक्राउ परेका व्यक्तिले दिएको बयानले प्रहरी पनि परे तिन छक्क
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै …